खोपकेको खुलासा-सरकार गम्भीर बन्ला त ?| Nepal Pati
खोज पत्रकारिता केन्द्र (खोपके) ले मिडिया मार्फत जनता माझ खुलासा गरेको विवरण पछिल्लो समय उत्सुकताको विषय बनिरहेको छ । मुलुकको आर्थिक हैसियत दिन प्रतिदिन खस्कँदै गएको समयमा स्विस नेसनल बैंकमा नेपालीहरुको नाममा करिब ५२ अर्ब रुपैया रहेको सार्वजनिक भएसँगै नयाँ बहसले जन्म लिएको छ ।
विदेशमा शंकास्पद लगानी गर्ने नेपालीहरूको नाम मिडियामा आएसँगै शुरु भएको बाध्यात्मक पत्रकार सम्मेलन , बक्तब्य बाजी र शुद्धताको विचारबाजी पछी दुई वटा सवालले एकसाथ जन्म लिएको छ । पहिलो सवालमा खोपकेले खोजबिन गर्ने क्रममा फेला पारेको रकमको बैधानिक स्रोत के हो ? दोस्रोमा गरीब मुलुकका नेपालीले किन स्वीस बैंक नै रोजे ?
‘नेपालिक्स’नामबाट गरिएको खोपकेको विस्तृत रिपोर्टिङमा ५५ नेपालीले विदेशमा लगानी गरेको खुलाईएको छ । मुलुकमा माओवादी हिंसा शुरु भएसँगै स्विस बैंकमा थपिएको करिब २७ अर्ब रकम स्विट्जरल्याण्ड कसरी पुग्यो ? त्यती मात्र हैन २०६२- ६३ को जनआन्दोलनपछि २६ अर्ब थप रकम स्विस बैंक पुगे सँगै सवाल गम्भिर बन्दै छ ।०५२ साल पछी रणनीतिक ढंगबाट बढाइएको हिंसासँगै मुलुकले बेहोरेको आर्थिक र राजनीतिक क्षतिको फाइदा खोपकेले रिपोर्टिङ गरेको व्यक्तिले पाएकै वा लिएकै हो त ? सतहमा आएका नामहरु प्रतक्ष्य राजनीतिसँग गाँसिएको नदेखिएको अवस्थामा स्विस बैंकमा जम्मा गरिएको रकम राजनीतिक नेताहरुको हो भन्ने कानूनी आधार छैन । तथापी खोपकेले खुलासा गरेको नामहरुको पेसा व्यावसाय हेर्दा स्विस बैंकसँग कारोबार गर्नु पर्ने तथ्य ,कारण र औचित्य देखा पर्दैन ।
राजनीतिक अस्थिरता सँगै शुरु भएको दलीय सहमतीमा राष्ट्रिय सम्पतिको लुट , सार्वजनिक खरिदमा दुरुपयोग , लेनदेनमा आधारित नियुक्ति, सरुवा र बढुवा , ठेक्का पट्टामा मिलीमतो , कर छली र चोरी , सार्वजनिक सम्पती र प्राकृतिक स्रोतको दोहन , सरकारी संग्लग्नतामा नियोजित आर्थिक हिनामिना , हतियार खरिदमा अपचलन , माओवादी हिंसाको नाममा गरिएको लुटपाट र बैंक डकैती , क्यान्टोनमेण्टमा नक्कली लडाकु खडा गर्दै गरिएको राष्ट्रिय दोहन , नेपाल वायुसेवा निगमको अथाह दोहन , एनसेल पुँजीगत लाभकर घोटाला , सुडान घोटाला , धर्म र स्थापित संस्था समाप्त गर्न इसाई रणनीति मार्फत मुलुक प्रबेश गरेको अथाह रकम हुण्डी मार्फत बिदेश पुगेको प्रमाण स्विस बैंकमा नेपालीको नाममा जम्मा रकमको कनेक्सन सरकारले खोज्न चाहे फेला पार्न सक्ने छ ।
विगतमा राजनीति मुलुकवाशीको सेवा थियो । विस्तारै राजनीति पेसा बन्न राजी भयो । पछिल्लो कालखण्डमा आएर राजनीति दलाल , विचौलिया र मिसन वाजहरुको कब्जामा पर्दै व्यापारमा बदलिएकाे छ । सामान्य तया मानिस धनी हुनुलाई जायज मान्नु पर्ने हुन्छ । वैश्य युगमा धनी बन्नु सबैको इच्छा , चाहाना र आवश्यकता नै बनी सकेको छ । धनी हुनु वा बन्ने कोशीस गर्नु अपराध होइन । प्रमुख कुरा धनी हुने बाटो कानुन सम्मत र पारदर्शी हुनु पर्छ । दुर्भाग्य साथ भन्नु पर्छ । राजनीतिक संक्रमणको फाइदा उठाउँदै कर्मचारी , दलाल , व्यापारी र राजनीतिक नेतृत्वको आन्तरिक सहमतीमा निर्माण गरिएको अबैध कारोबार र भ्रष्टाचारको जगमा धनी बन्ने कथित चाहाना स्विस बैंकमा पुगेको पुँजी बन्नुलाई दुर्भाग्य मान्न सकिन्छ ।
खोपकेले नाम खुलासा गरे सँगै पत्रकार सम्मेलन मार्फत गरिएको औचित्यहिन तर्कहरु मुलुकबाट एकपैसा बिदेश लगेको छैन । वा बिदेश बाट गलत ढंगले पैसा मुलुक भित्र्याएको छैन भन्ने सवाल नै हैन । प्रजातन्त्र होस कि लोकतन्त्र आम नेपाली जनताको आर्थिक अवस्था बीच ठूलो अन्तर देखिदै गएको पछिल्लो अध्ययन अनुसार नेपालमा केवल १० प्रतिशत धनीको हातमा ४० प्रतिशत गरिबको भन्दा २६ गुणा बढी सम्पत्ति छ।
२० प्रतिशत धनीले मुलुकको ५६ प्रतिशत सम्पत्ति आफ्नो मातहत राखेका छन । बाँकी २० प्रतिशतको हातमा चार प्रतिशतमात्र सम्पत्ति छ । यस्तो चरम आर्थिक असमानताको बीच मुलुकले जन्माएको पुँजीपतिहरुले स्विस बैंकमा राखेको पैसाको बैधानिक स्रोत के हो ?
स्विट्जरल्याण्डमा कुनै व्यापार नगर्ने नेपाली व्यापारीले स्विस बैंकमा नै पैसा राख्नु पर्ने कारण के पर्‍यो ? खोपकेले खुलासा गरेका मानिसले कर वापत कती रकम तिरेका छन ? कती मानिसलाई रोजगारी दिएका छन ? यदी सो रकमको स्रोत जायज र पारदर्शी छ भने मुलुकमा लगानी गर्न वा स्वदेशी बैंकमा राख्न के ले रोक्दै छ ? मुलुकको आर्थिक र राजनीतिक दुर्दशा कुन स्तरमा पुगीसकेको छ । स्विस बै‍ककाे नेपाल कनेक्सन आम जनता माझ ल्याउने खोपके धन्यवादको पात्र भएको छ । कम्तिमा मुलुक आफैले चलाएको सिंहदरबारले मान्छ भने खाेपकेले खुलासा गरेकाे गम्भीर सवाल प्रति तत्काल निस्पक्ष अनुसन्धान गर्नु सरकारकाे जिम्मेवारी र कर्तव्य हुनेछ ।